iOS 10 inovanza rima theme | IPhone nhau
Mazuva mashoma pamberi pekuburitswa kweshoko rakakosha, makuhwa akati wandei akatanga kutenderera, kunze kwemidziyo ingangobuditswa nekambani, mairi zvakanzi imwe yezvinhu zvitsva zveIOS 10 inogona kunge yaive theme yerima Izvo zvaizokanganisa zvese zvemuno kunyorera uye mamenyu eiyo inoshanda system.
Asi sezvakangoitika nezvose zvishandiso zvisina kuratidza, iyi inonzi yerima theme haina kuona chiedza hapana, kunyangwe zvakadaro kambani yakaratidza huwandu hwakawanda hwezvinhu zvitsva, kunyanya mune inoonekwa mamiriro ezaziso uye mukudyidzana navo.
Asi iyo Apple haina kuzvizivisa hazvireve kuti ini handina chinangwa chekuzviita. Mushambadzi Andrew Wiik akagovana akati wandei skrini umo isu tingaone yakasviba modhi inoshanda mune yekutanga beta yeIOS 10 kuburikidza neXcode. Mune tweet yaWiik tinogona kuona maviri screenshots emessage application matiri kuona iyo yakasviba kumashure. Asi havazi ivo voga, nekuti musimudziri akagovanawo akati wandei mifananidzo yeiyo wachi, Safari uye iTunes.
Chero ani mushandisi akaisa beta anozokwanisa kuona kuti iko iko kushanda kweawa parizvino kunotipa rima kumashure theme. Sezvatinogona kuona mumifananidzo iri pamusoro pekushandisa maBooks neSafari zvakare vane rima tema. Iyo temaari yeSafari yakafanana chaizvo kana isiri iyo imwechete iyo inomisikidzwa patinotanga kubhucha zvakavanzika.
Mazhinji anga ari iwo mazano atakakuratidza eIOS 10 mauri maunogona kuona yakasviba modhi, iyo chaizvo uye sezvatinogona kuona mumawindo ezvinyorwa ino anotaridzika zvakanaka, kunyange ndichifanira kubvuma kuti ini inoyeuchidza yakawanda yeiyo Android inoshanda sisitimu, iyo kwemakore mazhinji yagara ichishandisa nhema sevara rekumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iOS 10 inovanza tema tema
Facebook Messenger inogadziriswazve nekuwedzera bhatani